Ayikwazi Ukuvula Amafolda E-imeyili Akho Azenzakalelayo. Ifayela Alilona Ifolda Ye-Offline File.
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Ifayela Alilona Ifolda Ye-Offline File
Imininingwane eningiliziwe mayelana "nephutha lefayela elingaxhunyiwe ku-inthanethi" Iphutha
Lapho starlapho Microsoft Outlook, uthola umyalezo wephutha olandelayo:
Ayikwazi ukuvula amafolda akho e-imeyili azenzakalelayo. Ifayela xxxx.ost akulona ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi.
lapho 'xxxx.ost'igama le- ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi (.ostifayela eyenziwe i-Outlook lapho isebenza ngebhokisi leposi le-Exchange ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ungahle ungajwayelani nefayela njengoba lenziwa ngokuphelele.
Kunezizathu ezimbili ezizodala leli phutha, ngokulandelayo:
The OST Ifayili lonakele noma lonakele, futhi alikwazi ukubonwa yi-Microsoft Outlook, ngakho-ke i-Outlook izobika leli phutha.
The OST ifayela lihlotshaniswa nebhokisi leposi kuseva ye-Exchange. Uma nganoma yiziphi izizathu, iMicrosoft Outlook ayikwazi ukufinyelela ebhokisini leposi le-Exchange elihambisanayo noma ku-start ukuvumelanisa ibhokisi leposi namafolda angaxhunyiwe ku-inthanethi ku- OST ifayela, lizobika leli phutha.Izinye izibonelo ezijwayelekile yilezi:
1. Ku-Outlook, awusethanga i-akhawunti ye-imeyili yokuthola ibhokisi leposi le-Exchange ngendlela efanele.
2. Ku-Outlook, ususa i-akhawunti ye-imeyili yebhokisi leposi le-Exchange.
3. Ku-Exchange server, ibhokisi leposi le-Exchange, noma i-akhawunti ye-imeyili yebhokisi leposi le-Exchange liyakhutshazwa noma lisuswe.
4. Kunezinkinga zokuxhumana phakathi kwe-Outlook neseva ye-Exchange.
5. Awunayo nhlobo i-akhawunti ye-imeyili ye-Exchange. Futhi i-akhawunti yakho ye-imeyili isuselwa ku-POP3, IMAP, HTTP noma amaseva weposi ngaphandle kwe-Exchange server. Kepha usetha i-akhawunti yakho ye-imeyili njenge-Exchange-based ngephutha.
Ukuxazulula leli phutha nokuvimbela ukulahleka kwedatha, kufanele wenze ngokulandelayo:
Thola OST ifayela elidala iphutha. Ngokuya ngolwazi olukulo mlayezo wephutha, ungalithola kalula lelo fayela. Ungasebenzisa futhi i- Ukucinga ukusebenza ku-Windows ukusesha ifayela le- OST Ifayela.
Sindisa idatha engaxhunyiwe ku-inthanethi ku- OST Ifayela. Ukushintshaniswa OST ifayela liqukethe idatha engaxhunyiwe ku-inthanethi, kufaka phakathi imilayezo yeposi nazo zonke ezinye izinto, ebhokisini lakho leposi le-Exchange, elibalulekile kuwe. Ukuhlenga le datha, kufanele ukusetshenziswa DataNumen Exchange Recovery ukuskena OST ifayela, buyisa idatha ekulo, bese uwagcina efayeleni le-Outlook PST ukuze ukwazi ukufinyelela kuyo yonke imilayezo nezinto nge-Outlook kalula nangendlela efanele.
Yenza isipele ifayela le- OST Ifayela. Ukuze uvikeleke, kungcono ulondoloze ngokulondoloza.
Qamba kabusha noma susa eyangempela OST ifayela elidala inkinga.
Uma ibhokisi lakho leposi le-Exchange ne-akhawunti ye-imeyili kusasebenza, kufanele uqiniseke ukuthi amasethingi we-akhawunti ye-imeyili ku-Outlook alungile, futhi i-Outlook ingaxhuma kwiseva yakho ye-Exchange kahle. Ngemuva kwalokho unga start Buka futhi uthumele / wamukele ama-imeyili akho ebhokisini leposi le-Exchange, elizokwenza i-Outlook idale entsha OST ifayela ngokuzenzakalela bese uvumelanisa imininingwane yalo nebhokisi leposi le-Exchange Uma le ndlela ingasebenzi, sicela ulandele imiyalo eku-5.2.
5.2. Uma ibhokisi lakho leposi le-Exchange noma i-akhawunti ye-imeyili ingasekho, noma awunayo nhlobo i-akhawunti ye-imeyili ye-Exchange, noma imiyalo ku-5.1 ayisebenzi, iphrofayili yakho yeposi yamanje ayilungile, kufanele uyisuse futhi dala entsha, ngokulandelayo:
Qhafaza i-5.2.1 Start, bese uchofoza Iphaneli yokulawula.
Qhafaza i-5.2.2 Shintshela ku-Classic View uma usebenzisa iWindows XP noma izinhlobo eziphakeme.
5.2.3 Qhafaza kabili Mail.
5.2.4 Ku- Ukusetha Imeyili ibhokisi lengxoxo, chofoza Bonisa Amaphrofayli.
5.2.5 Khetha eyodwa yephrofayili engalungile ohlwini bese uqhafaza Susa ukususa.
5.2.6 Phinda 5.2.5 kuze kususwe wonke amaphrofayli angalungile.
Qhafaza i-5.2.7 Engeza ukwakha iphrofayili entsha bese wengeza ama-akhawunti we-imeyili ngokwezinhlobo zawo.
I-5.2.8 Start Umbono, uzothola ukuthi inkinga iyanyamalala.